Munaasabadda Daahfurka Hawada Soomaaliya Oo Ka Socota Muqdisho – Goobjoog News
Munaasabadda Daahfurka Hawada Soomaaliya Oo Ka Socota Muqdisho
Magaalada Muqdisho waxaa ka soconeysa munaasabad ballaaran oo ku saabsan daahfurka hawada Soomaaliya, waxaana ka qeybgalaya madaxda sare ee dalka, madaxweynaha Galmudug, xildhibaanno, wasiiro, siyaasiyiin, fanaaniin iyo marti sharaf kale.
Madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamed C/laahi Farmaajo oo goor dhow gaaray halka ay ka socoto munaasabadan ayaa kormeeray goobta la dhigay qalabka casriga ah ee loogu talogalay maamulka hawada Soomaaliya.
Mas’uuliyiinta waaxda saadaasha hawada ayaa madaxweyne Farmaajo sharaxaad buuxda ka siiyey qaabka uu qalabkaan u shaqeynayo iyo awoodiisa inta ay la egtahay.
Waxaa goor dhow bilaaban doona khudbadaha ay jeedin doonaan madaxda dalka oo ay kaga hadli doonaan muhiimadda ay leedahay lasoo wareegista maamulka hawada Soomaaliya.
Waa markii ugu horreysay oo 27-sano kadib ay Soomaaliya lasoo wareegto maamulka hawadeeda.
Harriett Baldwin: UK uma Aqoonsana Somaliland Inay Tahay Dal Madax-bannaan, Wareysi
Wasiir Hore Oo Soo Dhoweeyey Ciidamada DFS Geysay Magaalada Baydhabo
Qlrgwb jtbkzp Generic cialis otc cialis
Dwadfb wpkmnn Viagra brand generic cialis
Mozvjx vwxhck Brand viagra cialis generic
Uohdpg liqgyq generic cialis canadian pharmacy online
Dhageyso: Maamulka Iyo Shacabka Hiiraan Oo Si Kulul Uga Hadlay Qaraxii Zoobe
clomid for women price https://salemeds24.wixsite.com/clomid...